यो तस्वीरमा एउटा बिरालो छ, पत्ता लगाउनुभयो ? फोटो छोएर हेरेर पत्ता लगाउनुस – List Khabar
Home / जीवनशैली / यो तस्वीरमा एउटा बिरालो छ, पत्ता लगाउनुभयो ? फोटो छोएर हेरेर पत्ता लगाउनुस
यो तस्वीरमा एउटा बिरालो छ, पत्ता लगाउनुभयो ? फोटो छोएर हेरेर पत्ता लगाउनुस
admin November 8, 2021 जीवनशैली Leaveacomment 303 Views
काठमाडौं । कहिलेकाहीँ हामीलाई आँखाले धोका दिन्छ । आँखैअगाडिको वस्तु पनि हामीले नदेखिरहेका हुन सक्छौं । ट्विटरमा एउटा तस्वीर राखिएको छ । त्यसमा एउटा बिरालो छ । तर त्यो बिरालो एकैपटकमा देखिँदैन । तपाईंले पत्ता लगाउन सक्नुभयो ?
यस्तै भारतवर्षका प्राचीन ग्रन्थहरूमा आजभन्दा लगभग १० हजार वर्षपहिले विमानहरूको चर्चा गरिएको पाइन्छ । रामायणमा रावणको पुष्पक विमान एउटा उदाहरण भयो । सैनिक क्षमता भएका विमानको प्रयोग, विमानहरूको भिडन्त तथा विमान अदृश्य हुने र एउटा विमानले अर्कोलाई लखेट्ने कुराहरू पुराणमा वर्णन गरिएका पाइन्छन् ।
प्राचीन विमान दुई किसिमका थिए स् मानव निर्मित विमान जुन आधुनिक विमान जस्तै पंखको सहायतामा उड्थे अनि आश्चर्यजनक विमान जुन एलियनको यूएफओ जस्ता देखिन्थे ।
कृतिमा विमान सञ्चालनको बारेमा जानकारी, उडानको समयमा सुरक्षाको जानकारी, तुफान र बिजुलीको आघातबाट विमानको सुरक्षा उपाय, सौर्य ऊर्जाको प्रयोग लगायतका विषयमा त्यसमा अटाएका छन् । कथासरित्सागर र कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा पनि विमानका विषयमा उल्लेख पाइन्छ ।
Previous यसरी गर्छन् श्रीमान श्रीमतीले एकापसमा इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ
Next स्क्रव टाइफसबाट गोरखामा पहिलो पटक मान्छेको मृत्यु